“Slalom Last Race”: tompondakan’i Madagasikara Rasoamaromaka Faniry | NewsMada
“Slalom Last Race”: tompondakan’i Madagasikara Rasoamaromaka Faniry
Nifarana, ny alahady lasa teo, ny fifaninanam-pirenena amin’ny “Slalom”. Voahosotra ho tompondakan’i Madagasikara 2019 Rasoamaromaka Faniry, mpanamorin’ny klioba TMF. Mbola norombahiny indray mantsy ny “Slalom last race”, dingana fahafito sady farany, amin’ity fifaninanana ity. Fihaonana notanterahina teny amin’ny “circuit” Ambohidratrimo. Nanana fe-potoana 5 mn 39, 83 s izy, teo amin’ireo sedra telo, notanterahina niaraka tamin’ny fiara Citroen C2. Nahazoany isa 161 izany, tamin’ity fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara ity.
Nitana ny laharana faharoa ny rahalahiny, Rasoamaromaka Mika. Nahazo isa 140 ny tovolahy tao anatin’ireo fifaninanam-pirenena natrehiny. Isa mametraka azy eo amin’ny laharana faharoa ka maha voahosotra azy ho tompondaka lefitra. Saika azon’izy mirahalahy ireo avokoa ny laharana roa voalohany, tamin’ireo dingana notontosaina, tamin’ity taona 2019 ity. Tsy mbola niala teo am-pelatanan’i Faniry izany ny anaram-boninahitra efa azony tamin’ny taon-dasa. Mieritreritra ny hiditra eo amin’ny sehatry ny “rallye” i Faniry, amin’io taom-pilalaovana 2020 io, ka ilay fiara Mitsubishi Evo X, fitondran’i Hery Be, rainy, no hoentiny amin’izany.
Iny “slalom last race” iny ihany koa no manakatona tanteraka ny taom-pilalaovana 2019, ho an’ny federasiona sport automobile Malagasy (FSAM). Miandry ny fanolorana ny amboara ho an’ireo mpandresy, izany ny rehetra.